स्वेटशर्ट्स otional प्रमोशनल कपडा • प्रोफेशनल P&M कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई
स्वेटशर्टहरू, अर्को पछाडि ट्राउजर i टी-शर्टहरूधेरै उद्योगहरूमा कर्मचारी लुगाको आधारभूत सेट हो। तिनीहरू कम्पनी, क्लब वा घटनाको विज्ञापन गर्ने उत्कृष्ट क्यारियर पनि हुन्, किनकि लोगो राखेर मात्र होइन, कपडाको र by्गले पनि उनीहरूलाई ब्रान्डसँग पहिचान गर्न सकिन्छ। स्वेटशर्ट्स जसले न्यानोपन प्रदान गर्दछ, आवाश्यक स्वतन्त्रता ज्याकेट भन्दा राम्रो अनुमति दिन्छ, र निजी कपडाको सुरक्षा गर्दछ।
स्वेटशर्ट्स - आरामदायी साथ हातमा फेसनशील जानुहोस्
हाम्रोमा पसल तपाइँ विभिन्न उद्देश्यका लागि विज्ञापन स्वेटशर्टको विस्तृत चयन पाउनुहुनेछ। हामी प्रस्ताव गर्छौं मोडेलहरू उच्च-गुणवत्ताका सामग्रीहरूले बनेका हुन् जसले लामो उत्पाद जीवनको ग्यारेन्टी गर्दछ।
तिनीहरूको सम्पत्तीहरूको लागि धन्यवाद, स्वेटशर्टहरूले शरीरको राम्रो मौसम बिभिन्न मौसममा सुरक्षित गर्दछ। मोडेलको विविधता तिनीहरूलाई वर्षभर सबै मौसम मा प्रयोग गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। मौसम वा काम गर्ने स्थितिको आधारमा, तपाईं न्यानो, जाडो र पातलो ग्रीष्मकालीन संस्करणहरू, साथै थोरै इन्सुलेट स्प्रि and र शरद जम्परहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
आराम र कार्यक्षमता
हामी राम्ररी जान्दछौं कि हाम्रा ग्राहकहरूको भिन्नै खरीद आवश्यकताहरू छन् जुन न कि कामका सर्तहरूको कारणले गर्दा हो, तर व्यक्तिगत प्राथमिकताहरूबाट पनि। यो थाहा पाएर, हामीले यो सुनिश्चित गर्‍यौं कि हाम्रो वर्गीकरणमा प्रस्ताव गरिएको स्वेटशर्टहरूमा सुविधाहरू छन् जुन फोहोरबाट जोगिन्छ, चेतावनी दिन्छ र हानिकारक रासायनिक पदार्थहरू विरूद्ध सुरक्षा दिन्छ।
सुविधा सहित कार्यक्षमता पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले धेरै मोडेलहरू कम्मरमा र कलाईमा आरामदायक वेल्टले सुसज्जित छन् ताकि अधिकतम थर्मल इन्सुलेशन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र कर्मचारीको निजी कपडालाई क्षति वा फोहोर विरूद्ध जोगाउँदछ। केहि स्वेटशर्टमा विशेष तत्वहरू छन् जुन सामग्रीहरूको म्याकेनिकल प्रतिरोध बढाउन स्थानहरूमा बढि प्रयोगको कारण हुने क्षतिको कारण देखा पर्दछ (उदाहरणका लागि कुहिनो)।
धेरै कम्पनीहरु यसको कदर व्यक्तित्व र निजीकरणविशेष गरी यदि कर्मचारीहरूले सम्भावित ठेकेदार र ग्राहकहरूको साथ सम्पर्कमा प्रतिनिधि भूमिका खेल्छन्। यस नेतृत्व अनुसरण गर्दा, यो उच्च-गुणस्तरको मार्किंग विधि छनौट गर्न लायकको छ जुन उच्च तापमानमा क्षति, घर्षण र धुने प्रतिरोधी हुनेछ। त्यसकारण हामी यसलाई एउटा टिकाऊ र रमणीय निजीकृतिका लागि सिफारिस गर्दछौं कम्प्युटर कढ़ाई.
यो कारणले गर्दा छ कि छापिएको लुगा विभिन्न प्रकारका बाहिरी कार्यक्रमहरू, प्रतिनिधि स्ट्यान्ड, सम्मेलनहरू र प्रशिक्षण सत्रहरूको लागि कपडाहरूको लोकप्रिय तत्व हो। कम्पनी वा निजीकरणको साथ क्लबको र in्गको कपडाले ब्रान्डको छविमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ र यसको प्रतिष्ठा बढाउँदछ।
हामी Reis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot र Adler जस्ता कम्पनीहरूबाट स्वेटशर्टहरू प्रस्ताव गर्दछौं। बिक्री समावेश: ऊन, कार्य ब्लाउज, polypropylene ब्लाउज, चेतावनी ब्लाउज, स्वेटर।
हामी उत्पादनहरु को छनौट र निजीकरण मा तपाइँको निपटान मा छौं। हामीसँग उन्नत मेशिन पार्क छ जसले हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरूको लागि कुशल कार्य र उच्च गुणवत्ता प्रदान गर्दछ। मोडेलहरूको पूर्ण दायरा दुबै हाम्रो अनलाइन स्टोरमा खरीद गर्न सकिन्छ www.pm.com.pl वा Allegro मा हाम्रो पसलमा "उत्पादक- BHP"। यदि तपाईं हाम्रो नमूना कढ़ाई आदेशहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया ट्याबको बारेमा भ्रमण गर्नुहोस् फर्मि.
परावर्तक sweatshirtकढ़ाईको साथ स्वेटशर्टलोगोको साथ sweatshirtपरावर्तकहरूको साथ स्वेटशर्टहुड बिना sweatshirtsसुरक्षा ब्लाउजहरूसक्रिय व्यक्तिहरूको लागि स्वेटशर्टहरूकाम को लागी sweatshirtsस्कूल को लागि sweatshirtsकम्पनी स्वेर्टशर्टशरद swतारी शर्टगर्मी स्वेटशर्ट्सविज्ञापन स्वेटशर्ट्सडु boat्गा hoodiesविज्ञापन स्वेटशर्ट्स वारसाविज्ञापन हुडिहरूयुनिसेक्स स्वेर्टशर्टहरूवसन्त स्वेटशर्ट्सहूड स्वेटशर्टहरूजेबको साथ sweatshirtsप्रिन्टको साथ स्वेटशर्टहरूजाडो स्वेर्टशर्टमहिलाको स्वेर्टशर्टपुरुषको स्वेर्टशर्टसबै भन्दा राम्रो विज्ञापन sweatshirtsस्वास्थ्य र सुरक्षा लुगाकामदारहरूको लागि लुगाविज्ञापन लुगावर्कवेयरखेल स्वेर्टशर्टसस्तो विज्ञापन स्वेटशर्टहरू